CIISE WUXUU BOGSIIYEY QOF GACAN ‘LA MAALIN SABTI AH! – Akhbaarta Wanaagsan
Posted on September 14, 2016 October 12, 2016 by Maroodiga
Ciise Markuu bogsiinaayay nika gacanta la,aa waxay ahayd maalin Sabti ah oo faarisiinta iyo culumada aysan wax shaqo ah qaban jirin oo ay Rabbiga quduus uga dhigi jireen,sida ku qornaa Kitaabka Towraaad Ee Muuse.
Markaasaa Farrisiintii carroodeen, oo Ciise ayaa garanayay inay doonayeen inay isaga Dilaan (Markoos3: 6). Wey la doodeen ayagoo leh ma banaana in waxaan la sameeyo maalinta Sabtida ah. Iyagoo doon doonaya sabab ay ku weeraraan asaga oo ku dilaan,oo waxay ka raadinayeen sabab ay ku dilaan hadaladiisa.
Ciise wuxuu bogsiiyey nin kaas oo gacantiisu aysan shaqaynayn oo ay qalalnayd.
Wuxuu ka dhigay mar kale mid shaqeeynaysa. Ciise wuxuu bogsiiyey ninka maalin sabti ah.
Ciise waa ogaay waxa ay Farrisiintu ay ka fekerayeen sidaas darteed ayuu weydiiyey,Muxuu leeyahay sharcigu inaanu samayno maalinta sabtida ah?
Wanaag ama shar (Markoos3: 4)?. Taana wey ka jawaabi waayeen faarisiintii.
Mar sii horeysay ayay ahayd marka farisiintu dhaheen xerta Ciise looma ogola inay sabuulka ama miraha beerta ay goostaan maalita Sabtida ah (Markoos 2: 23-24). Ciise aad ayuu ugu carrooday dadka Farrisiinta ah, laakiin sidoo kale Waxa uu ahaa mid ka xun sida ay jaahil uga ahaayeen nimcada illaah iyo qalbigoodii adag (Markoos 3: 5).
Markaas faarisiintii waxba ma aysan ka orran arintaas balse wey baxeen si ay u qorsheeyaan qaabkii ay ku dili lahaayeen Ciise (Markoos 3: 6). Ciise wuu u calool jilcay ninka gacanta la,aa,oo wuxuu kaloo u naxay hogaamiyaasha diinta waayo waxay ahaayeen kuwo qalbi adag oo aad u qalafsan.
Wuxuu ogaa in ay tahay xaq in uu sameeyo wax wanaagsan sabtida. Sabtida waxaa loo sameeyey dadka aawadiis,inay Ilaah ammaanaan (Markoos 2:27). xasuuso aayadda 2:28: Markuu Ciise ka hadlay wax ku saabsan Wiilka Aadanaha, taasoo loola jeedo,Ciise waa wax walba Rabbigood.
Haddaba walaalayaal Ciise waa Rabbiga Sabtiga, Sharciga iyo wax walba oo Adduunka Jirra .
Rabbigu Ha iddin barakeeyo.Aamiin.